Usuku olumnandi lokuzalwa in English. Usuku olumnandi lokuzalwa Meaning and Zulu to English Translation
Home>Words that start with H>Happy birthday>Usuku olumnandi lokuzalwa (Zulu to English translation)
What does Usuku olumnandi lokuzalwa mean in English? If you want to learn Usuku olumnandi lokuzalwa in English, you will find the translation here, along with other translations from Zulu to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Usuku olumnandi lokuzalwa meaning in English:
Indiza ithatha isikhathi eside kangakanani?
Ingabe uyamukela aseMelika?
Kwakuthinta kuyinjabulo ukukhuluma nawe
umakhalekhukhwini wami akusebenzi
Umculo onjani owuthandayo?
Ungene nomusa kakhulu